Taxanaha 1270 Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Jidkan googoynta badan wuxuu bixiyaa sicirro wax soo saar aad u wanaagsan oo qoto dheer ilaa 50 '(15 m). Iyada oo leh cabir jireed oo dhexdhexaad ah oo xooga la saarayo xakameyn fudud, toosan, tababarku waa sahlan yahay.
1270 Dragon® dredge waa dredge dhexdhexaad ah oo caadi ahaan loo isticmaalo dekedaha, dekedaha, wabiyada, iyo mashaariicda qodista marin biyoodka gudaha, iyo waliba soo celinta xeebta, dib u soo celinta dhulka, dhismaha jasiiradaha iyo xakamaynta daadadka.
1270 HALIS UGU DANBEEYA
Naqshadaynta isafgaradku waxay u oggolaaneysaa hawlgelinta degdegga ah iyo abaabulidda. Caqli ahaan way fududahay in la jiido oo lagu dhaqaaqo meelaha ku kooban.
Ku qalabaysan laba matoor naafto oo kala duwan, mid ka mid ah oo u heellan bamka qodista si loo helo wax soo saar wanaagsan.
Waxsoosaarka qotodheer ee aagagga xaddidan ayaa laga yaabaa in si weyn loo kordhiyo iyada oo la adeegsanayo ikhtiyaar ikhtiyaariga ah
Cabbirka siidaynta: 18 ″ x 18 ″ (450 mm x 450 mm)
Mashiinka Muhiimka ah ee Caterpillar C 32 : 800 HP (597 kW)
Kaaliyaha Mishiinka Kaaliyaha C 9 : 375 HP (280 kW)
Awoodda Quwada - Quwada: 155 HP (116 kW)